Iowa guyyaa har’a nama dhukuba Covid-19 qabaman baayen kan tae guyyaa tokkoti gabaasani jiru | KWIT
Iowa guyyaa har’a nama dhukuba Covid-19 qabaman baayen kan tae guyyaa tokkoti gabaasani jiru
By Fatiya Adam • Nov 25, 2020
Oromo News 11.25.2020
Oromo News 11/25/2020
Iowa guyyaa har’a nama dhukuba Covid-19 qabaman baayen kan tae guyyaa tokkoti gabaasani jiru. Kunis torbaan tarte kan kaahameture kan taruudha. Woodbury County keessati namni qabame 10,000 gaheera.
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti namni haarawa Covid-19 due 47 dha. Waliigalati Iowa keessati sababa Covid-19 namni due 2,271 dha, akkaata gabaasa website Coronavirus.Iowa.gov tti. Waliigalatti namni qabame ammo nama kuma dhiba 220 dha.
Woodbury County keessati, namni haarawa qabame 49 itti dabalamee jira. Waliigalatti namni qabame ammo kum 10 ol taree jira namni 96 ammo due, akkaata gabaasa mana fayyaa Sioux land tti.
Erga dhukubichi march keessa seene booda, namoonni kuma dhibba 218 ta’an kan qabaman yoota’an guyyaa kaleessa astti namni haarawni qabame 3,365 gabaafame jira. Hospitaali Iowa dhukubsattoota corona virus wajjiin rakachaa jiru.
Hir’innaa siree fi hir’inna hojattoota iraa kan ka’e hospitaali Iowa dhukubsattoota kara facilities ergaa jiran dura buaa’an association akka conference irra himametti.
Iowa workers Development akka gabaasseti hojii dhabdooni biraa 9,458 torbaan tarke keessa hojii dhabdummaadhan akka guutatan dubattan. Kunis torbaan tarte irraa fi hanga July as kara 3000 kan dabaleedha.
Manufacturing fi Construction baayiina irraa kan dhufaniidha.
Lakkoofsi jiraattota Iowa hanga ammaati birrii hojii dhabdummaa kan fudhataa jiran kara 37,000 olguddate jira.
Filannoon Iowa kan congressional lamaffaa seena ajaaiba godhu jira filannoon kun walqixxaa deemu jira. Democrat Rita Hart kan tatee republican Mariannette Miller filannoo kuma dhibba 394,400 keessa 35 tartee. County 24 keessa district 3 malee, filannoon kun baaye magaala keessati wal jala kalaahe ture.
Governor Nebraska Pete Ricketts fi itii gaafatamtooni medikaala fayyaa ummani akka dhukuba Covid-19
By Fatiya Adam • Nov 23, 2020
Oromo News 11/23/2020
Iowa guyyaa har’aa corona virus nama qabame 200,000 surpassed taate jirti, nama haarawa qabame 4,359
By Fatiya Adam • Nov 20, 2020
Oromo News 11/20/2020